ချစ်ကြည်အေး: ကိုကြီးကျောက် အခြေအနေ
khin oo may Sat Oct 09, 10:35:00 AM GMT+8
အားမငယ်နဲ့ ကိုကိုကျောက်. ခင်ခင်ရှိတယ်။
khin oo may Sat Oct 09, 10:36:00 AM GMT+8
ခင်က ဗလတောင့်တယ်သိလား အားကိုးစမ်းပါ.
Vista Sat Oct 09, 10:37:00 AM GMT+8
Ko Boyz Sat Oct 09, 11:02:00 AM GMT+8
ဘာမှ မပူနဲ့ ကိုကြီးကျောက်....
သဒ္ဓါလှိုင်း Sat Oct 09, 11:08:00 AM GMT+8
Anonymous Sat Oct 09, 11:21:00 AM GMT+8
Ko Kyi Kyauk,
I am so sad to hear that. We are Buddhist, so we need to live and follow as Buddha's teaching way.
I wish you to recover soon.Very very soon. Better and better.... Order your mind that you can pass this problem.
မိုးယံ Sat Oct 09, 11:24:00 AM GMT+8
အန်တီချစ်ရေ ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ သူနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ရင်လဲ ဘကျောက်က အမြဲနောက်ပြောင်နေတာ ဘာမှ မဖြစ်သလိုပဲ။ ဟိုတစ်လောက ခွဲမယ်စိတ်မယ်ပြောတယ်။ ကျော်မစ္စက ဖြစ်လာတယ်နဲ့ ကြည့်လိုက်တိုင်းလဲ သူများအိမ်တွေမှာ သူ့ခြေရာတွေချည်း ဒါကြောင့် ထူးပါတယ်လို့ စဉ်းစားနေတာ။ သူ့ဆီ မေးလ်ပို့မယ် အွန်လိုင်းမှာ စကားပြောလိုက်ဦးမယ်။ အားပေးစကားလဲ လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ သူက အားငယ်နေတဲ့ ပုံလဲ မပေါက်ဘူး။ တစ်ကယ့်ကို ပျော်ပျော်ကြီး ဖြတ်သန်းနေတာပဲ။
ကိုချစ်ဖေ Sat Oct 09, 11:41:00 AM GMT+8
ကိုကျောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကြံခိုင်မှု မြင်ရ မမြင်ရတဲ့ ဘလော့ မောင်နှမတွေအားလုံးအပေါ် ချစ်ကြည်ခင်မင် ရင်းနှီးမှု ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ပျော်ရွှင်အောင်နေတတ်မှု့တွေကို အတုယူသွားပါမယ်.
မေဓာဝီ Sat Oct 09, 11:59:00 AM GMT+8
ဘကျောက်ရေ ...... တင်းထားပါ .......
ခုလိုပဲ ကုသိုလ်တွေဆက်ပေးနေရင် ကံတွေတက်လာပြီး ကင်ဆာရောဂါကို အလဲထိုးနိုင်မှာပါ ...
မချစ်ကြည်ဆီပို့တဲ့ စာလေးကို အကြိမ်ကြိမ် ဖတ်ရင်း ........ ဘကျောက်ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်ဘူး။
လေးစားပါတယ် ဘကျောက် .....
Mg Moe Sat Oct 09, 12:16:00 PM GMT+8
SO SAD Big Bro! :(
ဇောင်း Sat Oct 09, 12:20:00 PM GMT+8
သေတစ်နေ့မွေးတစ်နေ့မို့ ဘ၀ကို ပျော်ပျော်ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ ကိုကြီးကျောက်ရေ၊ ကြားရတဲ့ သတင်းအတွက် တစ်ကယ့်ကို စိတ်မကောင်းမိပါတယ်ဗျာ.. :(
သက်ဝေ Sat Oct 09, 12:23:00 PM GMT+8
နောက်နေတာတော့ မဟုတ်လောက်ဖူး ထင်တာပဲ... ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နောက်တတ်ပြောင်တတ်လွန်းတာမို့ ကိုကြီးကျောက်တယောက် နောက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါစေလို့လဲ ဆုတောင်းနေမိတယ်...
Ko Paw Sat Oct 09, 12:36:00 PM GMT+8
ကိုကြီးကျောက်.... စိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်တာကို ချီးကျူးပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ မြွေပွေးသည်းခြေ ကို အစိမ်းစားတာတို့၊ အစိမ်းကို မရရင် အခြောက်ကို စားတာတို့ ထိရောက်တယ်လို့ ပြောသံကြားရပါတယ်။ အမေရိကားကို မှာယူလို့ လွယ်ရင် စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ဖို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ATN Sat Oct 09, 12:47:00 PM GMT+8
Anonymous Sat Oct 09, 12:53:00 PM GMT+8
ကိုကြီးကျောက် ရေ ... ကြားရတာ တကယ် စိတ်မကောင်းဘူး ... ရောဂါသက်သာအောင် စာတွေများများရေး များများဖတ် ... ကိုကြီးကျောက်အတွက် ဆုတောင်းပေးနေမယ်....
T T Sweet Sat Oct 09, 01:03:00 PM GMT+8
ကိုကြီးကျောက် စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒီလောက်ဖြစ်နေတာတောင် ပျော်ပျော်နေပြီး စာတွေရေးနေနိူင်သေးတဲ့ ကိုကြီးကျောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားမိပါတယ်။
Anonymous Sat Oct 09, 01:05:00 PM GMT+8
zaya Sat Oct 09, 01:15:00 PM GMT+8
I am one of Ko Gyi Kyaut'fan stayed in singapore.I feel so sad about your news.I admire your attitude and approach to lead the way of life.
I do hope you can handle current health issues, because I know this is not small issue for our human being and really big issue.
I wish you will be done well.We all follow this way one day when we never know .
I copied one of Buddha sayings:"IFaman speaks or acts withapure thought,happiness follows him,likeashadow that never leaves him"
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Sat Oct 09, 01:49:00 PM GMT+8
အဲဒီလို နောက်တာဘဲဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိတယ်..
ကော်မန့်တောင် ဘာရေးရမှန်းမသိအောင် ဖြစ်နေမိတယ်.. စိတ်မကောင်းလွန်းလို့
ကိုကြီးကျောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုကတော့ လက်ဖျားခါလောက်ပါတယ်
တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ရင်ဆိုင်တတ်တဲ့ ကိုကြီးကျောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အတုခိုးပါဦးမယ်..
ကိုကြီးကျောက်ရေ.. ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံးကို မျှော်တွေးထားပေါ့နော်
အမှန်ပြောရရင်တော့ ဘယ်လိုစကားလုံးတွေနဲ့ ကိုကြီးကျောက်အတွက် ရေးရမယ်ဆိုတာတောင် မသိတော့အောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်..
မြသွေးနီ Sat Oct 09, 02:07:00 PM GMT+8
အခုဟာက စ..နေ၊ နောက်နေတာများလားတောင် ထင်နေမိတယ်။
အစိုးမရပုံ မမြဲပုံတွေကို တွေးပြီး ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လာမိတယ်။
ကိုကြီးကျောက် ဟာသတွေနဲ့ ဘာတွေများပြင်ဆင်နေမလည်းလို့ မြသွေးစဉ်းစားနေမိတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း သြချမိပါရဲ့..ကိုကြီးကျောက်ရေ။ ဆုမွန်တောင်းနေလျှက်...
Anonymous Sat Oct 09, 03:00:00 PM GMT+8
evergreen Sat Oct 09, 03:44:00 PM GMT+8
Today is Unlucky day for me. I was fail the exam in the morning! Now I see that situation of Ko Gyi Kyauk. But really wonder his mind.
ကလူသစ် Sat Oct 09, 03:51:00 PM GMT+8
OMG!!!!!!!!!! ဘာပြောရမလဲတောင် မသိတော့ဘူး။
TURN-ON-IDEAS Sat Oct 09, 03:54:00 PM GMT+8
မမြဲခြင်းတရားတွေပဲ တည်မြဲတဲ့ လောကကြီးမှာ
လူတိုင်းလူတိုင်း မသေချာခြင်း စက္ကန့်တွေနဲ့ နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းနေကြရတာပါ...
အချိန်တိုင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး တန်ဖိုးရှိစွာ ဖြတ်သန်းမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်...
ဘကျောက် တရားအသိနဲ့ စိတ်အေးချမ်းသာယာပါစေဗျာ....
အဖြူရောင်နတ်သမီး Sat Oct 09, 04:20:00 PM GMT+8
ဘကျောက် အတွက် တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်...
သေခြင်းတရားကို မတုန်လှုပ်ပဲ တည်ငြိမ်တဲ့စိတ် ထားနိုင်တာ တကယ်မလွယ်တဲ့အလုပ်ကြီးပါပဲ..။
အပြုံးမပျက်တဲ့ ဘကျောက် တယောက် ရောဂါသက်သာပါစေရှင်...
Nge Naing Sat Oct 09, 04:38:00 PM GMT+8
မချစ်ကြည်အေးရေ အရင်တခါလာတုန်းက ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းမသိဘူး။ အခုတော့ အသုံးဝင်မလား ၀င်မလားတော့ မသိဘူး ပို့စ်တခု တင်ထားပေးပါတယ်။ အန်ကယ်နိုင် ကျန်ရှိတဲ့ အချိန်တွေကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) Sat Oct 09, 04:55:00 PM GMT+8
ကွန်ပျူတာဖွင့်ဖွင့်ချင်း ဘလော့ထဲ ၀င်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဘယ်သူတွေ အသစ်တင်ကြလဲပေါ့။ အမချစ်ကြည်အေးဘလော့မှာ ပို့စ်အသစ်တက်နေတာ တွေ့လိုက်တယ်။ ကိုကြီးကျောက် အခြေအနေဆိုလို့ ခွဲစိပ်ကုသမှုတွေ အောင်မြင်ပြီး ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာ ရှိနေပြီဆိုတဲ့ သတင်းအောက်မေ့နေတာ။ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မှ ဘကျောက်ရဲ့စာလေးကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ လုံးဝ စိတ်မကောင်းဘူး။ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းဘူး။ ဘကျောက် ဘုရားကု ကုပြီး အသက်တွေ ရှည်ကြာစွာ ဆက်တည်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘလော့ဂါအားလုံးကို အသိပေးတဲ့ အမချစ်ကြည်အေးကိုလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
pandora Sat Oct 09, 05:41:00 PM GMT+8
နာကျင်မှုတွေ လျော့ပါးပြီး အချိန်တွေကို အသက်သာဆုံးဖြတ်သန်းနိုင်စေဖို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Anonymous Sat Oct 09, 06:11:00 PM GMT+8
အပေါ်ဆုံးမှာရေးထားခဲ.တာ မခင်ဦးမေ အစစ်လား၊အတုလားတော.မသိဘူး၊
နောက်တယ်ပြောင်တယ်ဆိုတာ အခြေအနေအချိန်အခါကိုကြည်.ပြီးမှ နောက်သင်.ပါတယ်
အင်ကြင်းသန့် Sat Oct 09, 06:14:00 PM GMT+8
စာဖတ်ပြီး ဘာပြောရမှန်းမသိလောက်အောင်တောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိတယ်။ ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့တရားတော်များ ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့် ဘကျောက်ရဲ့ဝေဒနာတွေသက်သာလျော့ပါးစွာနဲ့
နေသွားနိုင်ပြီး အချိန်တွေကိုတည်ငြိမ်ရဲရင့်စွာ အပြုံးမပျက် ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ပါစေ.....း(((
ညီမလေး Sat Oct 09, 07:10:00 PM GMT+8
အကောင်းဘက်ကတွေးရင် ကျန်ရှိသေးတဲ့ အချိန်ကို ဘယ်လို အသုံးချရမလဲဆိုတာ ကြိုသိနိူင်တော့ အလဟသ မကုန်ဆုံးမိတော့ဘူးပေါ့လေ ... တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အပြုံးမပျက် ရင်ဆိုင်နိူင်ဖို့ ခက်ပေမဲ့ ရင်ဆိုင်နိူင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ် ။
ကိုဇော် Sat Oct 09, 07:47:00 PM GMT+8
စိတ်ဆိုတာ အရာရာကို ဆွဲဆန့်နိုင် ၊ တွန်းအား ပေးစေနိုင်ပါတယ်လေ။
ကိုယ့်စိတ်က ပျော်နေရင် လူကလည်း နေပျော်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ရောဂါလည်း တဝက် သက်သာတာပါပဲ။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဘဝကို ဆက်လက် ဆွဲဆန့်ရင်း အသက်ရှည်နိုင်ပါစေ ကိုကြီးကျောက်ရေ။
ဘုရား ၊ တရား လုပ်တာကတော့ အရှုံးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အသိ နဲ့ အသိလေးသာ ကပ်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
မောင်လေး Sat Oct 09, 08:07:00 PM GMT+8
စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်တဲ့ ကိုကြီးကျောက်ကို လေးစားမိပါတယ်..။
အရာရာကို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်သွားနိုင်ပါစေ...ကိုကြီးကျောက်ခင်ဗျား...။
Anonymous Sat Oct 09, 08:18:00 PM GMT+8
While really saddened by his news, I am extremely outraged by the whacky, irrelevant comments by the very 1st two comments.
Anonymous Sat Oct 09, 08:59:00 PM GMT+8
အားပေးစကားလည်းပြောချင်တယ် ဒါပေမယ့် အဲ့လိုတွေကြားရတော့ ကိုယ်တိုင်တောင် အားပျက်သွားမိတယ်း( ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး ။
ဇော်သိင်္ခ Sat Oct 09, 09:39:00 PM GMT+8
ကိုကြီးကျောက် ရဲ့ သတင်းကို ကိုကြီးကျောက်ရဲ့ ရွှေရတုမှတ်တမ်းမှာ ဖတ်လိုက်ရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ.. ကိုကြီးကျောက် တစ်ယောက် အသက်ရှည် ကျန်းမာစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ လည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
ကိုရင်နော် Sun Oct 10, 12:35:00 AM GMT+8
တကယ်ကို ဘာပြောရမှန်း မသိတော့ပါဘူးဗျာ...း(
ပြန်လည် ကျန်းမာစေဖို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ဗျာ....
မြစ်ကျိုးအင်း Sun Oct 10, 12:54:00 AM GMT+8
မထင်ထားတဲ့သတင်းမို့လို့ ဖတ်ရင်းနဲ့ လှိုက်ခနဲ ဖြစ်သွားရတယ်။
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ အခြေအနေ အလှည့်အပြောင်း တခုခု မဖြစ်လာဘူးလို့ မဆိုနိင်ဘူး။ အကောင်းဆုံးကိုပဲ မျှော်လင့်ချင်တယ်။
Anonymous Sun Oct 10, 12:58:00 AM GMT+8
ကိုကြီးကျောက် ဘုရားတရားသာလုပ်ပါ။ အသက်တရာနေရပေမဲ့ တရားလုပ်တဲ့ တစ်ရက်ဟာဘ၀မှာတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဒီရက်တွေမှာ အနိတ်ဌာရုံတွေနဲ့ ဝေးဝေးနေပါ။ သတ်တ၀ါတိုင်းသေမှာဘဲတစ်နေ့ မှာ။ သေမှာကြိုသိတာနဲ့ မသိတာဘဲကွာပါတယ်။ ကိုကြီးကျောက်နေကောင်းပြီး ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ။ မိတ်ဆွေတွေအများကြီးဘဲဥစ်စာ။
မခင်ဦးမေ ဟုတ်မဟုတ် မသိဘူး။ မခင်ဦးမေဆိုရင်လဲ အားပေးချင်စိတ်နဲ့ စိတ်ပျော်ရွှင်အောင် ရေးဖော်ရေးဖက် မောင်နှမချင်း နောက်ပြောင်အားပေးသွားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လို ပြောလိုက်ရမှန်းမသိ ဖြစ်ကုန်တဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းထဲ ရှိတဲ့စကားနဲ့ ရှာကြံ အားပေးကြတာပဲ။ စေတနာကို မမြင်ဘဲ အပြစ်ရှာဖို့တော့ မကောင်းဘူးထင်တယ်။
ကျုပ်လဲ annoymous ပဲ။ နာမည် ထည့်ရိုက်လဲ မနေချင်တော့လို့
မောင်ဘကြိုင် Sun Oct 10, 01:14:00 AM GMT+8
မရွှေစင်ပြောလို့ သူ့ဘလော့ဆီပြေးကြည့်တော့.....အားပြတ်သွား တယ်ဗျာာာာ
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) Sun Oct 10, 02:20:00 AM GMT+8
စိတ် ထိခိုက်မိပါတယ် အမရေ။
Anonymous Sun Oct 10, 03:50:00 AM GMT+8
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘုရားတရား နဲမပြတ်တာအကောင်းဆုံးပါဘဲ
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Sun Oct 10, 04:57:00 AM GMT+8
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်တယ်...စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးရတာ အားနာမိတယ်
အစကတော့ ကိုကြီးကျောက်က ၆ လကျော်ရင် သရဲpost ရေးသလိုလိုနဲ့ တကယ်လိုက်ချောက်မလို့...အဟတ်ဟတ်.. ကိုကြီးကျောက် စိတ်ဓါတ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်..
ခုလို မေးကြရေးကြတော့ ဝမ်းလဲသာတယ်..ဝမ်းလဲနည်းတယ်..ဝမ်းနည်းတာက အချိန်ကြာကြာ နောက်ပြောင်မနေရမှာစိုးလို့..
Anonymous Sun Oct 10, 07:54:00 AM GMT+8
Please tell Ko Gyi Kyauk.....Not to take Gall Bladder of snake,chicken.It can cause bleeding from stomach.
A Myanmar Doctor from Malaysia
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Sun Oct 10, 07:55:00 AM GMT+8
Anonymous Sun Oct 10, 10:04:00 AM GMT+8
ဘကျောက်သတင်းကြားတော့ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိတယ် ။
Anonymous Sun Oct 10, 10:38:00 AM GMT+8
လူတိုင်းတနေ့သေရမယ့်အတူတူ ကိုယ်နေခွင့်ရမယ့်အချိန်ကို ကြိုသိနေတာလဲ ကံကောင်းတာပါပဲ........ဝေဒနာကိုမှတ်ပြီး တရားများများထိုင်ပေးပါလား ဘကျောက် ........
Anonymous Sun Oct 10, 12:21:00 PM GMT+8
If I were him, I would like to get comfort somewhat like KOM so can hold the sadness for some extend. If I am counting my days, I will try to count the gratitutes I owe others, and will be saying thanks to them and how fortunate I am. Sure, Buddha will be the first one.
ဇွန်မိုးစက် Sun Oct 10, 08:28:00 PM GMT+8
ဖတ်ရတာ တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
အချိန်အခါတစ်ခု ကြိုတင်သိလိုက်ရတယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေနဲ့အတူ နောက်ဆုံးအချိန်အတွက် ပြင်ဆင်ရင်ဆိုင်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတစ်ခုလို သဘောထားပြီး အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းသွားနိုင်မှာပါ။
P.S. သြစတြေးလျက ဇွန့်အဖွားလေးတစ်ယောက် ကင်ဆာရှိတယ်ဆိုတာ သိရပြီး နောက်၁၇နှစ်ကြာထိ အသက်ရှင် နေထိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။
Anonymous Sun Oct 10, 09:10:00 PM GMT+8
I don't know how to express.
Hope for the best . Be Good luck, Ko Gyi Kyauk.
Anonymous Sun Oct 10, 10:12:00 PM GMT+8
She never consider what she should do or she shouldn't.
She ever follow her emotions, Not others' feeling.
Very sorry for Ba Kyauk.
အနမ်း Mon Oct 11, 12:54:00 AM GMT+8
ဟုတ်ရော ဟုတ်ရဲ့လားလို့ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေတုန်း..
မျှော်လင့်မိတာက တစ်မျိုးဆိုတော့.. ဒီသတင်းကိုဖတ်ရင်း ထ်ိန့်လန့်တုန်လှုပ် မိသွားတယ်..
blackcoffee Mon Oct 11, 08:52:00 AM GMT+8
စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ... ထပ်တူဝမ်းနည်းမိပါတယ်... အဲဒီကင်ဆာ ဆိုတာကြီးကို နာမည်ကို မကြားချင်ပါဘူး.. သူ့ နာမည် ကြားရင် တစ်ယောက်ယောက်တော့ သွားတာဘဲလေ..
Tin Mon Oct 11, 01:56:00 PM GMT+8
Tin Mon Oct 11, 02:19:00 PM GMT+8
ကျ နော့် မှာ ကိုယ့် ဘဝ ဘယ် လို အ ဆုးံ သတ် မယ် ဆို တာ မသိကြသေးလို့ ပျော်လို့ ကောင်းနေစဲပါ။ သံ ဝေ ဂ ရ ရုံ , တ ရား ကျ ရုံ နဲ့ လဲ သံ သ ရာ မှ မ လွတ် မြောက် နို်င် မှန်း သ တိ ထား မိ ပါ တယ်။
ကိုကြီးကျောက် အနေနဲ့ အရှုံးထဲ ကအမြတ် ရအောင် ကြိုး စား အား ထုပ် ယူနိုင်ပါစေ။
ခင် မင် လေး စား စွာ ဖြင့်